ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5Tech မှချို့တဲ့ခြင်းကိုမပြုနည်းလမ်းများ
caller ID တို့လက်ထက်၌ဖြစ်မီ, သင်လုံခြုံစိတ်ချစွာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ dial နိုင်နောက်ယောင်ခံလိုက်စာသားနဲ့လူမှုရေးမီဒီယာ (သို့မဟုတ်မိန်းကလေးရဲ့) သင့်ရဲ့လက်ချောင်းခလုတ်နှိပ်မှထုံဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်ထပ်ခါထပ်ခါအရေအတွက်. နည်းပညာ၏ခေတ်သစ်အံ့ဖွယ်သင့်ခြေလှမ်းတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကြေညာမှုနှင့်အတူ, သင့်အမည်နှင့်အရေအတွက်သည်သူ၏ဆဲလ်အလေးခုအပေါ်ကို pop up ကိုမြင်လျှင်, ငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်တစ်ရက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းလှည့်ဖြစ်. တူညီတဲ့စာသားများအဘို့အသွား, အီးမေးလ်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျ. သင်သည်အဘယ်မှာရှိပါအံ့သြစာသားနဲ့သင်ဘာကိုလုပ်နေပြီးနောက်ဒါဟာ @JohnDoe အချိန်နာရီကိုအပေါ်သူ့အားတွစ်တာတိုင်းနာ​​ရီသင့်ကြွေးကြော်သံထုတ်ဖတ်သို့မဟုတ်စာသားရချင်သောဖွယ်ရှိမယ်. ဒီလှည့်ပတ်ကသူ့ကိုအောက်ပါ၏နည်းပညာနှင့်ညီမျှသည်, အဆက်မပြတ်ကိုသူ၏ပခုံးကျော် peaking.
သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ overdependence နည်းပညာကိုတခုတခုအပေါ်မှာ overdependence အဖြစ်ထွက်ကြွလာ၏မယ်ဆိုရင်, အတွယ်ကပ်ဖြတ်စာပို့ပတ်သက်သည်မထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှပေါ်ရွှေ့, tweeting, သူ့ကိုအောက်ပါစာတိုပေးပို့ရေးသို့မဟုတ်အခြားဆိုက်ဘာ.
အားကစားခန်းမ Hit. ထို elliptical ပြန်တယ်, သင်တက်ဆင်းအဖြစ်, dial သို့မဟုတ်စာသားရန်သင့်စွမ်းရည်ကို sloppy မှကြယ်မှသွားလိမ့်မည်. သင်နှင့်တူထွက်လာတယ်ဆိုတာတစ်ခုခုစာပို့အပေါ်စီစဉ်ထားမဟုတ်လျှင်, "ဟူ t w? သင် clingy ရနှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားမရှိပေ "တက် Wgats. တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းအနားယူရန်သင့်အားကူညီ De-စိတ်ဖိစီးမှုနိုင်, downhill ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုသွားရရန်လိုအပ်ကြောင်းအောင်. သင်ကအားကစားရုံအသင်းဝင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်, ထွက်ပြေးတစ်ရုံသွားသင့်ကိုယ်ပိုင်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုအမူအကျင့်ကနေအရရမရကြဘူး. လမ်းလျှောက်အဘို့သင့်ကိုခွေးထဲကယူ, သင့်ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းလှည့်ပတ်နေတဲ့ jog အဘို့အသွားသို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံပန်းခြံမှာဆိုင်ကယ်လမ်းကြောင်း hit. မှတ်မိဖို့အဓိကသော့ချက်အရာ: အိမ်မှာဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အားကစားရုံ Locker ၌သင်တို့၏ကလာပ်စည်းကိုချန်ထားပါ. သင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်, သင်ကအသုံးမနိုင်.
တစ်စုံတစ်ဦးကိုပဌနာ. သတ်မှတ်ထားသောဖုန်းခေါ်အတိုင်းသင်တို့အင်္ကျီမိတ်ဆွေတယောက်အမည်ပေးပါ. သင်ကဒုတိယခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်တတိယစာသားပါစေနှင့် ပတ်သက်. တဲ့အခါ, သင်ကသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်နိုင်သည် - နေသမျှကာလပတ်လုံးအခြားတဖက်မှာပေါ်တွင်လူတစ်ဦးကသင့်ကောင်လေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးမဖြစ်သကဲ့သို့. သင်၏မိတ်ဆွေသင်သည်ဆင်းစကားပြောပါစေ, သင်ကုမ္ပဏီစောင့်ရှောက်ရန်သင်၏အသက်တာတွင်လူများများရှိသည်သောသင်တို့၌သတိပေး.
ဆိုက်ဘာမညှာပြုပါ. သင်အနည်းငယ်လွန်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရှာဖွေကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပျက်ဘူးဆိုရင်, သင်ကသိသာစေလျှင်သူဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါအခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ. သင်သည်သူ့ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုရင်, သူ့ကိုအပေါ်ကိုတက်ကိုစစ်ဆေးမလိုပါ 20 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်. နောက်ဆုံးတော့, သူသည်သင်တို့ကိုကမြင်နေရတယ်ဆိုတာသိတော်မူသောအခါဖြစ်နိုင်မိမိကိုမိမိနှင့်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ Pics post လွန်းသည် smart င်. သူကစမတ်မပါရှိလျှင်, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူနှင့်အတူ? သင်သည်သူ၏လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာတဦးများပြားလွန်းပုံရိပ်ကိုတကွက်ဖမ်းရန်ဖြစ်ပျက်ဘူးဆိုရင်, အဆက်မပြတ်မှတ်ချက်များ post မ. သူ, နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများက, သင်သည်သူ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိုင်းငါးမိနစ်ဖြင့်သိရန်မလိုအပ်ပါ.
ဆဲလ်အရာအပေါ် Go. သင်ပေါ်တွင်တွယ်ကပ်ပုတ်တက်စေမယ့်ဆိုရင်, တစ်နေ့အဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်သင့်ကလာပ်စည်းကိုတင်. ဒီဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့တူပုံပေါ်ပေမယ်, မိုဘိုင်းဖုန်းများစဉ်အဖြစ်သို့ရောက် လာ. ရှေ့တော်၌ထိုလူသားမျိုးနွယ်ရှည်လျားအပေါ်သယ်ခဲ့ပါ. သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပါ, တစ်ခုလုံးကိုနေ့အဘို့တစ်အံဆွဲထဲမှာထားလေ၏နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူအစီအစဉ်များစေ.
မြို့ Hit. မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညနေခင်းထွက်စီစဉ်ထားပါ. သင်အလုပ်များထမင်းစားခန်းင်နေစဉ်, နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်များတောက်ကခုန်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်, သင်သည်သင်၏မေတ္တာကိုမျှော်ခုကိုခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အလျှောက်သူ့ကိုစာပို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမှာ peaking ရှာဖွေပြုလျှင်, သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတခြားနည်းနဲ့ရှာကြစဉ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စာသားထဲတွင်ရရန်လိုသော, ပစ္စုပ္ပန်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပစ်လိုက်.